Adiyisɛm 22 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Yohane Adiyisɛm 22:1-21
Nkwa nsu asubɔnten (1-5)
Asɛm no awiei (6-21)
‘Bra! Begye nkwa nsu kwa’ (17)
“Awurade Yesu, bra” (20)
22 Na ɔkyerɛɛ* me nkwa nsu asubɔnten+ bi a ani tew te sɛ ahwehwɛbo. Ná ɛretene fi Onyankopɔn ne Oguammaa+ no ahengua no mu; 2 ɛtene fa kurow no kwantempɔn mfinimfini. Ná nkwa nnua sisi asubɔnten no afanu nyinaa, a ɛsow aba mpɛn 12 afe biara; bosome biara, ɛsow. Nnua no nhaban na wɔde sa amanaman no yare.+ 3 Nnome biara remma bio. Onyankopɔn ne Oguammaa no ahengua+ bɛtena kurow no mu, na ne* nkoa bɛsom no; 4 na wobehu n’anim,+ na ne din bɛwɔ wɔn moma so.+ 5 Bio nso, anadwo befi hɔ,+ na wɔrenhia kanea anaa owia hann, efisɛ Yehowa* Nyankopɔn bɛma hann ahyerɛn wɔn so,+ na wobedi hene daa daa.+ 6 Ɔka kyerɛɛ me sɛ: “Nsɛm yi yɛ nokware,+ na ɛrenni huammɔ; yiw, Yehowa,* Onyankopɔn a ɔnam adiyifo so kasae no,+ wasoma ne bɔfo abɛka nneɛma a ɛsɛ sɛ ɛba ntɛm akyerɛ ne nkoa. 7 Hwɛ! mereba ntɛm.+ Anigye ne obiara a odi nkɔmhyɛ asɛm a ɛwɔ nhoma mmobɔwee yi mu no so.”+ 8 Me Yohane, me na metee eyinom nyinaa na mihui. Na bere a metee na mihui no, mibutuw ɔbɔfo a na ɔrekyerɛ me nneɛma yi nyinaa no nan ase sɛ meresom no. 9 Nanso ɔka kyerɛɛ me sɛ: “Hwɛ yiye! Nyɛ saa! Meyɛ akoa kɛkɛ te sɛ wo ne wo nuanom adiyifo ne wɔn a wodi nsɛm a ɛwɔ nhoma mmobɔwee yi mu so no. Som Onyankopɔn.”+ 10 Ɔsan ka kyerɛɛ me sɛ: “Nsɔ nkɔmhyɛ nsɛm a ɛwɔ nhoma mmobɔwee yi mu no ano, efisɛ bere a wɔahyɛ no abɛn. 11 Nea ɔnteɛ no, ma ɔnkɔ so nyɛ ade a ɛnteɛ; na nea ne ho agu fĩ no, ma ɔnkɔ so ngu ne ho fĩ; nanso ma ɔtreneeni nkɔ so nyɛ adetrenee, na ma nea ɔyɛ kronkron nkɔ so nyɛ kronkron. 12 “‘Hwɛ! mereba ntɛm; akatua a mede rebɛma no kura me, na metua obiara ka sɛnea n’adwuma te.+ 13 Mene Alfa ne Omega,*+ odikanfo ne okyikafo, mfiase ne awiei. 14 Anigye ne wɔn a wɔhoro wɔn ntaade,+ sɛnea ɛbɛyɛ a wobenya kwan akɔ nkwa nnua+ no ho, na wɔanya kwan afa kurow no apon+ mu akɔ kurow no mu. 15 Kurow no akyi na nkraman* ne wɔn a wodi ahonhonsɛm ne aguamammɔfo* ne awudifo ne abosonsomfo ne wɔn a wɔpɛ atoro na wodi atoro nyinaa wɔ.’+ 16 “‘Me Yesu, na mesomaa me bɔfo sɛ ommedi eyinom ho adanse nkyerɛ mo sɛnea ɛbɛboa asafo ahorow no. Mene Dawid ntini ne n’aseni,+ ne adekyee nsoromma+ a ɛhyerɛn no.’” 17 Na honhom no ne ayeforo+ no kɔ so ka sɛ, “Bra!” na ma obiara a ɔte no nka sɛ, “Bra!” na ma nea osukɔm de no biara mmra;+ ma nea ɔpɛ biara mmegye nkwa nsu kwa.+ 18 “Obiara a ɔte nkɔmhyɛ nsɛm a ɛwɔ nhoma mmobɔwee yi mu no, midi no adanse sɛ: Sɛ obi de biribi ka eyinom ho+ a, Onyankopɔn de ɔhaw a wɔakyerɛw wɔ nhoma mmobɔwee yi mu+ no bɛka ne ho; 19 na sɛ obi yi asɛm bi fi nkɔmhyɛ nhoma yi mu a, Onyankopɔn beyi ne kyɛfa afi nkwa nnua+ no ne kurow kronkron+ no mu, nea wɔakyerɛw ho asɛm wɔ nhoma mmobɔwee yi mu no. 20 “Nea odi eyinom ho adanse no ka sɛ, ‘Yiw; mereba ntɛm.’”+ “Amen! Awurade Yesu, bra.” 21 Awurade Yesu adom nka akronkronfo no.
^ Anaa “ɔbɔfo no kyerɛɛ.”
^ Anaa “A ne Y.” Greek nkyerɛwde no, Alfa na edi kan na Omega na etwa to.
^ Kyerɛ sɛ, wɔn a wɔyɛ nneɛma a ɛyɛ tan wɔ Onyankopɔn ani so.
^ Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ, “Aguamammɔ.”